टेलिभिजन र रेडियो वाणिज्य - NYE काउन्टीडाउन
टेलिभिजन र रेडियो कमेन्टहरू
NYECountdowns.com, llc। विश्वको सबैभन्दा अविश्वसनीय रचनात्मक र उत्पादन घरहरूको एक बहन कम्पनी हो ... Killerspots.com, Inc।
हामीले सैकड़ों नाइट क्लबको सहयोग गरेका छौं, प्रमोटरहरू र एरेनास वर्ल्डवाइड पछिल्लो 15 वर्षको लागि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पार्टीको लागि तयारीमा छ! अब यो तपाईंको बारी! केही चाँडै आवश्यक छ? भयो! कुनै भाषा। कुनै लम्बाई। संसारमा कहीं पनि!
हाम्रो KILLER डेमो हेर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस् वा हाम्रो विशेष च्यानल भ्रमण गर्नुहोस्
* 15 एक क्लिक भन्दा कम फेसबुक विज्ञापनहरू
60 SEC रेडियो स्पट
रेडियो विज्ञापनहरू जुन तपाईंको नयाँ वर्षको ईश्वरीय EPIC बनाउनेछ! हामीले सालभरि नै स्याहारको रातो चक्र र स्थानहरूको लागि हत्यारा रेडियो उत्पादन गरेका छौं। हत्यारा रेडियो व्यवसाय प्राप्त गर्नुहोस् जुन तपाईले अहिले नै व्यवसाय पाउनुहुनेछ!
30 सेकेन्ड टिभि स्पट
अविश्वसनीय टेलिभिजन र वेब स्थानहरू जसले तपाईंको मोजे बन्द गर्दछन् ... कुनै पनि भाषामा! आउनुहोस् हामी हाम्रो विशेष टेलिभिजन विजयी रचनात्मक प्रसारण उत्पादन क्षमताहरूको प्रयोग गर्न नयाँ वर्षको हवमा तपाईंको ढोकामा गधा ल्याउनको लागि! टर्नराउन्ड टाइम 5-7 व्यापारिक दिन हो ... त्यसैले छिटो समय सकियो!
60 सेकेन्ड वेब / टीवी स्पट
सोशल मिडिया तपाईंको महाकाव्य नयाँ वर्षको हव प्रबर्धन गर्ने उत्तम तरिका हो। हामी तपाईंलाई एक वेब भिडियो बनाउन सक्छौं जुन तपाईं साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ र जनता ल्याउन सक्नुहुन्छ! तपाइँलाई यो ग्यारेन्टी माया गर्नुहुन्छ।